सरला राइले नचाईन लाहुरे दाईहरुलाई - Pardeshi Khabar
सञ्जय याक्खा/ हहङ्कङ। लाहुरे भन्नु बित्तिकै बफदारिको पर्यावाची शब्द हो । लाहुरेहरु हेर्दा जती रमाइला देखीए पनि लाहुरेहरुको पिडा आफ्नै हुन्छ । बन्दुकको गोलिसँग जीवनको हिसाबकिताब गर्ने र दुश्मन सँग बन्दुकको फायरीङको भाषामा दोहोरी खेल्ने लाहुरेहरुलाई गीत संगीतले छुदैन भन्नु पापै लाग्ला । लाहुरेहरु गीत संगीतमा रम्नु पनि उत्तिकै माहिर हुन्छन । लाहुरेहरुलाई कुनै डान्स नम्बर गीत चाँहीदैन रमाउनुको लागि लैबरी भाका होस् या हाक्पारे लाहुरेहरु सुर समाएर नाचिहाल्छन । मलाई लाग्छ लाहुरेको अर्को पर्यावाची शब्द रमाइलो । गत २८ जुनमा युङलङ थिएटर हल लाहुरेमय बन्यो । लाहुरेको फर्मल पहिरनमा ठाटिएका लाहुरेहरु तमास नाचे । सबै भारतीय भुपु आर्मि हुन तर त्यहाँ नचाइको जोश हेर्दा भर्खर कसम परेड सकेका रेगरुट सिपाहीको जोश देखिन्थ्यो । भुपुहरुले प्रमाणित नै गरीदीए कि “स्टिल वि आर नट टायर्ड् ” मात्र रिटायर्ड आर्मि हौ ।
लाहुरे हरु तेसै त्यहाँ नाचेका भने होइनन् । भारतीय भुपु गोर्खा संघ हङकङद्वारा आयोजित डा. महबिर पुनको अभियान राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रको सहयोगार्थ एक सांगितिक कार्यक्रममा किराती पहिचान झल्किने पहिरनमा ठाटिएकी नेपालकी चर्चित गायिका सरला राईले लाहुरेहरु लाई नचाएकी हुन । जब गायिकाले सर सर बतासै चल्यो गीत गाउनु सुरु गरिन लाहुरे हरु जुर्मुराइ हाले । भारतीय भुपु गोर्खा संघ हङ्कङका अध्यक्ष जजिन चाम्लिङ स्टेजमा उत्रिए पछी अन्य लाहुरेहरु झन के हेरी बस्न सक्थे । पल्टनमा नम्बरी नम्बरी झै सुर कसेर नाचि हाले अनी त तेहाको माहोल नै अर्कै भयो एस्तो लाग्यो कि लखनौ जिआरआरसी भित्र लाहुरेहरुको कुनै रमाइलो पार्टी चलीरहेछ । गायिकाले तिम्रो माया र बुकी है फुल्यो गीत गाऊदा सम्म थाकेका थिएनन् नाचेर लाहुरेहरु समय कै अभावले धित मरुन्जेल नाच्न पाएनन लाहुरे दाई हरु । उता गायिका सरला भन्छिन दाजै हरुले नाचेर साथ दिदा छर्लङै उज्यालै पारुङ लागेको थियो अर्थात गाउने जोश तेसै आउछ तर समयको अभावले मेरो पनि गाऊने धित कहाँ बाट मरोस । हौ दाई आच्चक्ली नाच्नू भो त गाठे भनी सोध्दा केबी सुब्बा (लाहुरे दाई) भन्छन खै गीत सुने पछी अझै बिस बाइसे नै लाग्छ पहिले पल्टने जोश सकीएको छैन सरला राईले गाई रहदा मनै थाम्नु सकीएन तमास नै नाचियो । उक्त संघका अध्यक्ष पनि भन्छन गीत संगीतले छुए पछी पहिलेको पल्टने जोशले गाजी हाल्छ, सरलाले गाए पछी मौका नचुकोस भनेर सुरु देखी नै सुर समाइ हलियो ।
भारतीय भुपु संघ हङ्कङले रमाइलो कै लागि भने यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हैनन । डा. महाबिर पुनले चाल्नु भएको अभियान राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्ने हेतुले आयोजना गरीएको कार्यक्रम हो । उक्त कार्यक्रमबाट उठेको रकम डा. महाबिर पुनलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । संघका अध्यक्ष चाम्लिङ सँग अप्पर्झट भेटमा सोधी हाले , किन राष्ट्रिय आविश्कर केन्द्र लाई नै सहयोग गर्ने सोच बनाउनु भयो ? बिशेष त राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्र राष्ट्रको निर्माण हुने हो, महाबिर पुनको ब्यक्तीगत हैन यो राज्यको लागि पुनको एकल अभियान हो । जो कोहीले पारीकल्पना गर्नु सक्ने कुरा हैन । वास्तवमा यो राज्यले निर्माण गर्नु पर्ने हो तर पुनको निर्णयलाई समेत वास्ता नगरी रहेको अवस्थामा हामीले केही सहयोग गर्ने जमर्को गरेका हौ । उक्त कार्यक्रममा शिब परीयार, मिलन लामा, शर्मिला गुरुङ, श्रुती गुरुङ, दम प्रकाश पुन, त्रिश्ना घर्ति मगर र सुजन तिगेलाको प्रस्तुती रहेको थियो ।
त्यसै गरी ब्यस्त गायिका सरला लाई ५/१० मिनेटको भेटमा यती सोधी हाले , तपाईंलाई यो कार्यक्रममा सामेल हुँदाको अनुभव बताउनुहोस न ? गायिका भन्छिन सागितिक कार्यक्रममा मात्र नभएर एउटा एेतीहासिक कार्यमा सामेल हुन पाए खुशी त तेसै छु गर्ब लागेको छ । सम्पूर्ण आयोजक तथा हङ्कङ बासी नेपाली दाजु भाई दिदी बहिनी प्रती हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु ।
सरला एकल साँझ
अाइतवार युङ्लङ थिएटरमा लाहुरेहरु नाचेको देखेर यता थुलुङ समाज हङ्कङले गायिका सरलालाई तेसै छोडेनन । गत मंगलवार साङ्रिला करी हाउसमा थुलुङ् समाज हङ्कङले सरला एकल साँझ आयोजना गरेको थियो । तेहाको माहोल पनी हेर्नु लायक नै थियो । साङ्रिला करि हाउसको फ्लोरमा पाइला राख्ने ठाउँ थिएन । ५० देखी ६० जनाको क्षमता रहेको उक्त फ्लोरमा ८० को हाराहारीमा उपश्थित आगन्तुकलाई गायिका सरलाले मनग्गै नचाईन ।
सरला साँझमा गायिकाले नौ सय खोला तरेर (साकेला बिट) गीत बाट सुरु गरेर मन भने रित्तो भो, घाम जुन, तिम्रो माया, सर सर, साउने भेल तरी नी लै लै, मिनी बसमा चढेर, भिरैमा फुल्ने, बुकी है फुल्यो र सेवान्ने लौ है सेवान्ने (साकेला बिट ) गरी ११ वटा गीत प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
फोटो सौजन्य : जेपिटी एचके
« विवाह नै नगरी विधवा, ९० लाख क्षतिपूर्ति ! (Previous News)
(Next News) भारतीय गोर्खा भूपू सांझ -२०१७ भव्यताका साथ सम्पन्न »